Qalabkan waxaa loo isticmaalaa buuxinta iyo ku xirida boorsada sanduuqa.
Tuubadu waa qasabad caag ah oo polyetylen ah waxayna leedahay nus-shid / xakameyn xakamayn buuxda iyo saxnaanta socodka. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu shubo inta badan cabbitaannada aan ololi karin ee weelashayada.
GMacluumaadka iyo sharaxaada
Awoodda 10l 20l Semi-Collapsible Jerry Can oo laga sameeyay fasalka cuntada ldpe.
Waa weel loogu talagalay isticmaalka guud ee reerka qaadista iyo keydinta biyaha la cabbo.